Ururinta Dharka Dumarka
Sabti 4 Bisha Sagaalaad 2021
Ururinta Dharka Dumarka Ururinta, Naadiga Macaroni, waxaa dhiirrigeliyay The 'macaroni' & # 039; s laga bilaabo badhtamihii qarnigii 18aad ee ku xidhnaa dadka caanka ah ee maan-dooriyaha ah. Macaroni waxay ahayd ereyga ragga dhaaftay xadka caadiga ah ee moodada London. Waxay ahaayeen halyeeyada astaanta qarnigii 18aad. Ururintaan ayaa looga golleeyahay in lagu muujiyo awoodda astaanta marki la soo dhaafay, iyo abuurista Naadiga Macaroni sida astaanta kaligeed. Faahfaahinta qaabeynta waxaa laga soo qaatay dharka Macaroni ee 1770, iyo isbeddellada moodada hadda jira oo leh cabir aad u xun iyo dherer.
Wakhtiga Loo Yaqaan 'timepiece'
Jimco 3 Bisha Sagaalaad 2021
Wakhtiga Loo Yaqaan 'timepiece' Argo waxaa qoray Gravithin waa waqti ku habboon oo nashqadeyntiisa uu waxyooday sextant. Waxay ka kooban tahay laba lambar oo garaacis ah, oo lagu heli karo laba shaati, Deep buluug iyo Badda Madoow, iyadoo lagu sharfayo astaamaha taariikhiga ah ee markab Argo. Qalbigeeda ayaa garaacday dhaqdhaqaaqa 'Swiss Ronda 705' oo ah wareegga halbawlaha, halka muraayadda safayr iyo 316L xoog leh oo bir la caddeeyay ay xaqiijinayaan xitaa iska caabin badan. Sidoo kale waa 5ATM biyo u adkeysan kara. Waqtiga ayaa lagu heli karaa seddex midab oo kaladuwan (dahab, lacag, iyo madow), laba daah oo garaac ah (Deep Blue iyo Black Sea) iyo lix moodal oo xargaha ah, laba agab oo kaladuwan.
Khamiis 2 Bisha Sagaalaad 2021
Ururinta Dharka Dumarka Naqshadeynta aruurinta isku-darista jirka ayaa ah in loo isticmaalo cuteness sidii habka badbaadada. Astaamaha cute ee la aasaasay waa xargaha, ruffles, iyo ubaxyada, waxaana lagu dhejiyaa farsamada dhaqameedyada iyo farsamooyinka isku-habboon. Tani waxay dib ugu soo celineysaa farsamooyinka isku-habboon ee isku-dhafka ah isku-dhafan casri ah, oo ah jacayl, madow, laakiin sidoo kale weligiis ah. Qaabka guud ee naqshadeynta 'Hybrid Beauty' waxay kor u qaadeysaa jiritaanka si loo abuuro naqshado aan waqti lahayn.
Arbaco 1 Bisha Sagaalaad 2021
Giraantu Mimaya Dale, oo ah naqshadeeyaha giraanta Ohgi ayaa soo gaarsiisay farriin astaan leh oo ay ka muuqato fargalkan. Dhiirrigelinta ay ka sameysay giraanta ayaa ka timid macno wanaagsan oo taageerayaasha isku laabma ee reer Japan ay leeyihiin iyo inta ay u jecel yihiin dhaqanka Jabaan. Waxay u isticmaashaa 18K Dahab huruud ah iyo safayr agabka ah waxayna soo saaraan Aura raaxo leh. Waxaa intaa dheer, taageere laalaabku wuxuu ku fariisanayaa giraan ku yaal xagal kaasoo bixiya qurux gaar ah. Qaab dhismeedkeedu waa midnimo ka dhaxaysa Bariga iyo Galbeedka.
Talaado 31 Bisha Sideedaad 2021
Giraantu Gabo giraanta waxaa loogu talagalay in lagu dhiirrigeliyo dadka si ay dib ugu eegaan dhinaca ciyaarta ee nolosha oo badanaa lumiya marka ay weynaadaan. Naqshadeeyaha waxaa ku dhiirrigeliyay xusuusta ah inuu arkay wiilkeeda oo ku ciyaaraya tuubadiisa sixirka midabka leh. Isticmaaluhu wuxuu ku ciyaari karaa giraanta isaga oo wareegaya labada qaybood ee madaxbannaan. Markaad sidan sameysid, noocyada midabka dhagaxa ah ama mowjadaha mowduucyada waa la jaan qaadi karaa ama la isma qaban karaa. Ka sokow dhinaca ciyaar, isticmaaluhu wuxuu leeyahay xulashada xirashada giraan kala duwan maalin kasta.
Isniin 30 Bisha Sideedaad 2021
Giraantu Luullada qoob-ka-ciyaarka ku dhex jira hirarka badda ee guuxaya, waa natiijada ka dhalata dhiirrigelinta ka timaadda badda iyo luul waana giraan moodel ah oo 3D ah. Giraantan waxaa loogu talagalay iskudarka dahabka iyo luulka midabada leh qaabdhismeed gaar ah si loo hirgaliyo dhaqdhaqaaqa luul inta udhaxeysa hirarka badda ee guuxaya. Dhexdhexaadiyaha tuubbada ayaa lagu doortay cabir wanaagsan oo ka dhigaya naqshaddu mid adag oo ku habboon in laga dhigo qaabka la soo saari karo.
HandiShred Xaashiyaha Warqada Arbaco 22 Bisha Sagaalaad
Gamsei Is Biirsaday Talaado 21 Bisha Sagaalaad
Aix Arome Cafe Kafeega Isniin 20 Bisha Sagaalaad
Ururinta Dharka Dumarka Wakhtiga Loo Yaqaan 'timepiece' Ururinta Dharka Dumarka Giraantu Giraantu Giraantu